Wasiir Oomaar “Sharcigan waa Dastuurkii lagu dhaqi lahaa hay’adda duulista rayidka Soomaaliyeed” – Kalfadhi
Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kulanoodii 32aad ee Kalfadhiga 6aad, waxaa ay uga doodeen hindise-sharciyeedka duulista rayidka.
Wasiirka Wasaarada gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed cabdulahi Salaad oomar, oo kulanka ka qeyb-gallay ayaa aaminsan in sharciga uu yahay Dastuurkii lagu dhaqi lahaa hay’adda duulista rayidka Soomaaliyeed.
2017, ayuu sheegay in ay bilaabeen ka shaqeynta sharciga, iyadoo ay wasiiro kale ay horray usoo wadeen ka shaqeynta sharciga, tan iyo xiligaasi waxaa ay wasaaradu ka shaqeyneysa wax-ka-bedelista, meel-marinta sharciga.
Oomaar, ayaa sheegay in qeybta koowad ee ka shaqeynta sharcigaasi ay hadda usoo dhammaatay, madaama Golaha shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ay soo ansixiyeen sharciga, islamarkaana hadda uu horyaallo Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Sharciga waxaa uu ku sheegay in uu yahay mid ahmiyadiisa aan lasoo koobi karin, madaama uu soo maray marxalado kala duwan. Sida Dastuur la’aan uusan u jiri karin dal, ayuu sharcigan la’aantiisa aysan u jiri karin hay’adda duulista rayidka, ayuu yiri.